यिनै हुन् तपाइको फोन सम्पर्क नहुँदा मा’फ गर्नुहोला भन्ने युवतीहरू : सुन्नुहोस् अहिले पनि उस्तै आवाज ! (भिडियो) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/यिनै हुन् तपाइको फोन सम्पर्क नहुँदा मा’फ गर्नुहोला भन्ने युवतीहरू : सुन्नुहोस् अहिले पनि उस्तै आवाज ! (भिडियो)
सुबानी मोक्तानले पनि आफ्नो स्वर दिएकी छन्। अनुपमा कर्माचार्यले केही अन्य विज्ञापनमा पनि स्वर दिएकी छन्। हाल उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आबद्ध छिन्।भूमिका थापा पहिला रेडियो तथा टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्थिन् भने सुबानी मोक्तान गायिका हुन्।
बोझो एक फाइदा अनेक
यी दुइ चर्चित गायक गायिकाको स्वरले र’साए सारा नेपालीका आखा , एकपटक अवस्य हेर्नुहोला ( भिडियो )